तुलना गर्न जोड्नुहोस् Added! तुलनाबाट हटाउनुहोस्
यस विद्यालयको लागि राज्य स्तर कसरी निर्धारण गरियो?
प्रत्येक स्कूलले सबै लागू संकेतकहरूको लागि स्कोर प्राप्त गर्दछ। यी सूचकहरूको स्कोर ०-११ बिन्दु मापनको आधारमा अन्तिम वायुसेवा पत्र ग्रेड उत्पादन गर्नका लागि तौल गरिन्छ। (डाटा स्रोत: २०१-201-२०१ school स्कूल वर्ष) थप जान्नुहोस्
समयको साथ ग्रेड
यस सूचकले स्कूलमा अंग्रेजी / भाषा कला र गणितमा ग्रेड-स्तर मापदण्डहरूको विद्यार्थी दक्षता मापन गर्दछ।
यो सूचक स्कूल मा प्रवीणता तिर विद्यार्थी वृद्धि मापन गर्दछ। प्रत्येक विद्यार्थीले प्रदर्शनको विकासको प्रकारको आधारमा बिन्दुहरू कमाउँछ (कम वृद्धि, सामान्य विकास, उच्च वृद्धि)। पोइन्टहरू दक्षता तालिकामा विकास प्रयोग गरेर तोकिए। स्कूलहरू यस मेट्रिकमा १०० अंकहरू पार गर्न सक्दछन्।
स्नातक र कलेज र क्यारियर तत्परता
यो सूचकले स्कूलमा चार वर्ष र पाँच बर्ष भित्र विद्यार्थीहरूको इन्डियाना स्नातक आवश्यकता पूरा गर्दछ, र विद्यार्थी प्रमाण-पत्र पोस्टसकन्डरी तत्परता दर्साउँछ।